Wasiirka Amniga Qaranka Soomaaliya: Lama cafinayo ragii Muqdisho ku dilay gabartii ardayda aheyd – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
30th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka Amniga Qaranka Soomaaliya, Cabdi-Kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay inuu rajeynayo garsoorka dalka iney mudankooda marsiiyaan rag la sheegay iney 6-dii bishaan April degmada Yaakhshiid ku dileen gabar ardayad ah oo dhawaan ka qalinjebisay jaamacad.
Wasiirka oo shalay maalintii 3-aad su’aalo uga jawaabayey baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay iney hay’adaha amaanku ay gacanta kusoo dhigeen dadkii dilay gabadhaas, islamarkaan u gudbiyeen hay’adda garsoorka.
Wasiir Guuleed ayaa sheegay in raga dilay gabadhaas aan la cafin doonin xitaa haddii ay cafiyaan qoyskii gabadhaasi ka dhalatay.
“Waxaad ogtihiin inaan gacanta kusdoo dhignay ninkii dilay gabartii ardayda aheyd ee Soomaaliyeed, waxaan u gudbinay garsoorka oo aan ka rajeynayo inuu marsiiyo xadkii iyo wixii uu mudnaa” ayuu yiri wasiirka amniga qaranka Soomaaliya C/kariim Xuseen Guuleed.
“Dambiga la galo waa labo nuuc, dambi qof laga galo iyo dambi qaranka laga galo, marka waxaan aaminsanahay in dilka gabadhaas ah ahaa mid qaranka laga galay oo qoyskeeda kaliya uusan cafin Karin” ayuu sidoo kale yiri wasiir Guuleed.
6-4-2014 ayay ahayd markii wiilal dhalinyaro ah ay dil bareer ah u geysteen Alle ha u naxariistee gabar Soomaaliyeed oo la oran jiray Nafiso Cismaan Salaad, waxaana dilkaasi ka dhacay dhabarka dambe ee warshadda Coca Cola ee degmadda Yaaqshiid.
Hay’ada Nabad Sugida Soomaaliya ayaana dhowr maalmood kadib soo bandhigtay labo dhallinyaro ah, haweeney iyo gaari la sheegay in loo adeegsaday fulinta dilka gabadhaas.